Yangon American International School: Preparing students for an unpredictable tomorrow, today | Myanmar Business Today
HomeBusinessYangon American International School: Preparing students for an unpredictable tomorrow, today
Yangon American International School: Preparing students for an unpredictable tomorrow, today
In the world today, change is one of the few things that is certain. With the rapid evolution of technology, science, and globalization, it is not enough for our students to cope with uncertainty, but to embrace, adapt and thrive in the evolving 21st Century environment. To empower students to be prepared for the future, Yangon American International School has adopted the International Baccalaureate Primary Years Program (IB PYP) into its modern curriculum framework.
“By the time our elementary school students graduate from college, they will be competing for jobs that do not even exist today,” said Robert Crutchfield Yangon American Head of School, adding, “With the IB PYP program, we teach our students to develop critical thinking and inquiry skills that will enable them to be ready to learn new skills and succeed inaworld where change is rapidly evolving in many fields such as Artificial Intelligence and the environment.”
As an IB candidate school, Yangon American goes beyond teaching subjects one class atatime. Throughout the school year, students participate in units that look at concepts through many different lenses such as Social Studies, English Language Arts, Mathematics, and Science. Students work together to explore and answer essential questions or make connections toatheme that allows them to takeabroader look at their own learning as well as the world around them.
At Yangon American, students are also encouraged to take ownership of their learning and understand how they can use their knowledge and skills to effect change in their communities. The focus on preparing students for the future and developing the whole child is evident in all aspects of the school and is tied together across the board by the IB Learner Profile.
The IB Learner Profile is focused on developing internationally-minded young people to recognize their common humanity and concern for the environment while helping to createabetter and more peaceful world. Students work on their academic skills through the lens of the IB PYP Learner Profile.
IB PYP learners know how to take responsibility for their learning, collaborating with teachers and each other inastudent-centered environment to deepen understanding and increase their confidence and self-motivation. Through actively engaging in integrated ongoing assessments they become effective, self-regulated learners who can act on constructive feedback.
“The IB PYP program helps our students expand their knowledge of the subjects that they are studying as well as learn to look at various issues and problems through different perspectives,” said Mr. Crutchfield, adding, “Our students are developing skills that they can take with them throughout their lives.”
The IB Primary Years Program is the first of the four IB programs and was designed to ease the transition for students into the IB Middle Years Program. The program aims to promote inquiry and foster the development of the whole child throughaunique “transdisciplinary framework,” meaning that children learn in terms of issues and themes rather than categorically defined subjects.
The IB PYP isaunique approach to learning that offers many benefits to primary school students. For example, IB PYP encourages children to think independently and take responsibility for their actions and learning. Students are taught the basic concepts of the IB learner profile to help them develop positive, open-minded attitudes towardavariety of topics, skills, and issues.
The program’s “inquiry-led approach” allows students to be active participants in their learning by asking questions, exploring ideas, and sharing knowledge with their peers. The classroom isadynamic atmosphere that encourages students to make discoveries and choose what they would like to study.
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် မပြောင်းလဲဘဲ တည်မြဲနေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ ပြောင်းလဲခြင်းတရားဟု ဆိုရမည့်အလား ဖြစ်နေပါသည်။ နည်းပညာ၊ သိပ္ပံနှင့် ကမ္ဘာ့ရွာဖြစ်လာခြင်း Globalization ဖြစ်စဉ်များ လျှင်မြန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ၂၁ ရာစုတွင် မသေချာမှုကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်ရုံနှင့် မလုံလောက် တော့ဘဲ အပြောင်းအလဲကို လက်ခံပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ရှင်သန်တတ်ရန်လည်း အရေးကြီးလာပါသည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို အနာဂတ်အတွက် အသင့်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်စေရန် Yangon American International School သည် ၎င်း၏ ခေတ်မီသင်ရိုးညွှန်းတမ်းမူဘောင်တွင် International Baccalaureate Primary Years Program (IB PYP) စနစ်ကို ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
Yangon American ၏ ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်သူ Robert Crutchfield က “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရတဲ့အချိန်ဆိုရင် အခုခေတ်မှာ မရှိသေးတဲ့ အလုပ်အကိုင်သစ်တွေအတွက် သူတို့ ပြင်ဆင်လျှောက်ထားကြရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ IB PYP စနစ်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဝေဖန်စဉ်းစား တွေးခေါ်မှုစွမ်းရည်၊ စူးစမ်းမှုစွမ်းရည်တွေ ဖွံ့ဖြိုးအောင်သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေက Artificial Intelligence လို့ခေါ်တဲ့ ဉာဏ်ရည်တု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အစရှိတဲ့ အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန်တဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာ သူတို့တွေ ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေကို​ လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့ အထောက်အကူပြုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
IB စနစ်အသုံးပြု ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်သည့် Yangon American သည် အတန်းချိန်တစ်ချိန်တွင် ဘာသာရပ်တစ်ခု သင်ကြားခြင်း သက်သက်သာမဟုတ်ဘဲ စာသင်နှစ်တစ်လျှောက်တွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် လူမှုရေးဘာသာရပ် များ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ သင်္ချာ၊ သိပ္ပံအစရှိသည့် မတူညီသည့် ရှုထောင့်များမှ သင်ခန်းစာသဘောတရားများကို ရှုမြင်သုံးသပ် သင်ယူရပါသည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတူတကွပေါင်းစု၍ စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ အဓိကကျသည့် မေးခွန်းများ အတွက် အဖြေများရှာဖွေခြင်း၊ သို့မဟုတ် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအတွက် ချိတ်ဆက်စဉ်းစားခြင်းတို့ဖြင့် မိမိတို့ သင်ယူနေသည့် ဘာသာရပ်သာမက မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကမ္ဘာလောကကို ပို၍အမြင်ကျယ်ကျယ် ကြည့်ရှုတတ်စေရန် လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Yangon American တွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် မိမိတို့၏ သင်ကြားသင်ယူမှုကို တာဝန်ယူရသည်သာမက မိမိတို့၏ ဗဟုသုတနှင့် စွမ်းရည်များကိုအသုံးပြု၍ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်သို့ ကောင်းမွန်သည့်အပြောင်းအလဲများ မည်သို့ ဆောင်ယူနိုင်ပုံကိုလည်း နားလည်နိုင်စေရန် သင်ယူရပါသည်။ ကျောင်းတော်ကြီးသည် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့် အနာဂတ်အတွက် အသင့်ဖြစ်အောင့် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ အာရုံစိုက်လျက်ရှိပြီး ဤလုပ်ဆောင်မှုတို့ကိုလည်း IB Learner Profile ကိုအသုံးပြု၍ ပေါင်းစည်းထားပါသည်။
IB Learner Profile ဆိုသည်မှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို လူသားဆန်စေရန်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်တတ် စေရန်သာမက ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသည့် ကမ္ဘာလောကကို ဖန်တီးရာတွင်ကူညီတတ်စေရန် နိုင်ငံတကာအမြင်ရှိသော လူငယ်များအဖြစ် ပျိုးထောင်ပေးသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ပညာရေး စွမ်းရည်များကို ဖွံ့ဖြိုးအောင် IB PYP Learner Profile ရှုထောင့်မှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
IB PYP စနစ်ဖြင့်သင်ကြားသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် မိမိတို့၏ သင်ကြားသင်ယူမှုအပေါ် မည်သို့တာဝန်ယူ ရမည်ကို သိရှိနားလည်ပြီး ကျောင်းသားဗဟိုပြု သင်ကြားမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆရာများနှင့်သာမက ကျောင်းသားအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ နားလည်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့် မိမိကိုယ်မိမိတွန်းအားပေးမှု ပိုမိုမြင့်တက်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ကြရပါသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံမှ စဉ်ဆက်မပြတ် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ထိရောက်စွာလေ့လာတတ်သော၊ မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းကျောင်းနိုင်သော လေ့လာသင်ယူသူ များ၊ အပြုသဘောဆောင်သည့် ဝေဖန်အကြံပြုချက်အပေါ် လိုက်နာလုပ်ဆောင်တတ်သူများ ဖြစ်လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
“IB PYP စနစ်ဟာ ကျောင်းသားတွေ သင်ယူနေတဲ့ ဘာသာရပ်မှာ သူတို့ရဲ့သိနားလည်မှုကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရုံတင်မကဘဲ ပြဿနာနဲ့ ကိစ္စရပ်မျိုးမျိုးကို မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်တွေက ကြည့်ရှုတတ်အောင် သင်ကြားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့တစ်သက်စာ အသုံးချလို့ရမယ့် စွမ်းရည်တွေကို ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု Mr. Crutchfield ကထပ်မံပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
IB PYP စနစ်ကို အသက် ၃ နှစ်မှ ၁၂ အတွင်း မူလတန်းကလေးငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်၍ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှ ကျောင်းပေါင်း ၁၈၀၀ ခန့်တွင် IB PYP စနစ်အသုံးပြု၍ သင်ကြားလျက်ရှိပြီး အစိုးရကျောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနှင့် နိုင်ငံတကာကျောင်းများအပါအဝင် ကျောင်းအမျိုးမျိုး ပါဝင်ပါသည်။ Yangon American သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး IB PYP အသိအမှတ်ပြု နိုင်ငံတကာကျောင်းတော်ကြီး ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
IB Primary Years Program (IB မူလတန်းအစီအစဉ်) သည် IB အစီအစဉ် လေးခုရှိသည့်အနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားများကို အလယ်တန်းအစီအစဉ်ဖြစ်သည့် IB Middle Years Program သို့ ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းနိုင်စေရန် ရေးဆွဲထားသည့် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစနစ်တွင် မေးမြန်းစူးစမ်းမှုကို အားပေးပြီး ‘ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကို လွှမ်းခြုံသည့် မူဘောင်’ တစ်ခုကိုအသုံးပြု၍ ကလေးငယ်များ ဘက်စုံဖွံဖြိုးစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် ဘာသာရပ်ဖြင့် ခွဲခြားထားသော သင်ခန်းစာများကိုသာ သင်ကြားရခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပြဿနာများ၊ အဓိကခေါင်းစဉ်များကို အခြေခံ၍ လေ့လာသင်ကြားရပါသည်။
IB PYP သည် မူလတန်းအဆင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည့် တစ်မူထူးခြားသော သင်ကြားရေးချဉ်းကပ်ပုံကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ဥပမာဆိုရသော် IB PYP သည် ကျောင်းသားများကို လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်တတ်စေရန်၊ မိမိတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် သင်ကြားသင်ယူမှုအပေါ် မိမိတို့ဘာသာ တာဝန်ယူတတ်ရန် တိုက်တွန်းအားပေးပါသည်။ ကျောင်းသားများကို IB Learner Profile တွင်ပါဝင်သည့် အခြေခံသဘောတရားများကို သင်ကြားပေးပြီး မတူကွဲပြားသည့် အကြောင်းအရာများ၊ စွမ်းရည်များ၊ ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အပြုသဘော ဆောင်သည့်၊ အမြင်ကျယ်သည့် စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်များဖြစ်လာစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
ဤစနစ်၏ ‘မေးမြန်းမှုအခြေခံ ချဉ်းကပ်ပုံ’ သည် ကျောင်းသားများကို မေးခွန်းများမေးမြန်းတတ်ရန်၊ အယူအဆသစ်များကို စူးစမ်းကြည့်ရန်၊ မိမိတို့အချင်းချင်းကြား ဗဟုသုတများ ဝေမျှရန် အားပေးပြီး မိမိတို့၏ သင်ကြားသင်ယူမှုတွင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ စာသင်ခန်းသည်လည်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်၊ မိမိတို့ မည်သည်ကိုသင်ယူလိုသည်ကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန် ကူညီအားပေးသည့် ပြောင်းလဲနေသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
IB PYP သည် ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ‘နိုင်ငံတကာအမြင်ရှိစေရန်’၊ တစ်နည်းဆိုရသော အခြားသူများကို စာနာတတ်ပြီး ကွဲပြားသည့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့များကို သိရှိနားလည်သူများဖြစ်လာစေရန်လည်း သင်ကြားပေးပါသည်။ ၄င်းသည် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ သဘောထားအမြင်ကို ပုံဖော်ပေးသည့် အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး နောက်ခံ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာစကားမတူညီသည့် အခြားသူများကို သင့်လျော်စွာနှင့် ပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံတတ်စေရန် သင်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Those prices are one of the main reasons why many people turn to buying Modafinil from online pharmacies instead of going to the doctor these days. buy cialis If you want to get Modafinil for cheap, then buying this drug online is the absolute best way to go.
Previous article2C2P Partners with KBZPay to Expand the Digital Payments Network in Myanmar
Next articleYangon Amata Smart and Eco City Project Kicks Off